Ok Lacag lagu keydsanayo caymiska - Amjambo Africa
Ok Lacag lagu keydsanayo caymiska
Qoraalkeennii hore, waxaan uga soo hadalnay sababta ay muhiim u tahay in loo helo caymis habboon. Bishan, waxaan ka wada hadli doonnaa siyaabaha lacag loo kaydin karo intaad sidaas samaynayso. Halkan waxaa ku yaal fikrado ku saabsan siyaabaha loo yareeyo lacagta caymiskaaga.
Biil otomaatig ah. Shirkadaha xambaara badankood waxay macaamiishooda siin doonaan qiimo dhimis ay ku sameynayaan diiwaangelinta lacagaha soo noqnoqda, ha noqdaan bille, bille, ama sanadle. Shirkaduhu waxay bixiyaan qiima dhimistaan maxaa yeelay waxay ku bixin karaan dadaal badan iyo ujuuro isku dayaya inay la xiriiraan macaamiisha lacag-bixintoodu daahday, siyaasaddooduna ay halis ugu jirto in laga joojiyo bixinta. Marka shirkaduhu waxay rabaan inay ku dhiirrigeliyaan macaamiishooda inay doortaan biil otomaatig ah, sidaas darteedna siyaasadaha dhimista.
Telematics. Qaar badan oo xambaarayaal ah ayaa hadda bixiya tiknoolajiyad la socota caadooyinka darawalnimada gaar ahaaneed ee darawalka – caadooyinka sida xawaaraha, istaagida, waqtiga ay safrayaan. Iyada oo ku saleysan waxqabadka, xogtan waxay hoos u dhigi kartaa heerka caymiska darawalnimada, ama waxay bixin kartaa lacag-celin. Telematics waa hab fudud oo lagu waafajiyo qiimaha caymiska baabuurta iyo dabeecadda qofka, waxayna si weyn u yareyn kartaa heerka macmiilka – mararka qaar illaa 25%. Teknolojiyadda Telematics-ka ayaa soo hagaagtay sannadihii la soo dhaafay, mararka qaarkoodna waa lagu dari karaa codsiga casriga ah.
Siyaasadaha isku xidhka. Shirkadaha caymiska waxay siiyaan qiimo dhimis – iyo adeegga ugu fiican – macaamiisha qaada dhammaan \_”khadadka\_” caymiska iyaga oo wata. Haysashada labadaba caymiska baabuurta iyo kan guryaha (haddii ay tahay guri, kondho, ama kireysteyaal) isla shirkadda wadaha waxay siisaa qiimo dhimis ballaadhan labada siyaasadood.
Caymiska hore. Dhererka caymiska hore wuxuu ku bixin karaa keyd midkood caymiska baabuurta ama hantida, waxay kuxirantahay side. Shirkadaha qaar, marba marka ka sii dheer ee uu macaamilku lahaa caymiska baabuurta, sicirka ayaa ka sii fiicnaan doona. Macaamiil kasta oo hela qiima cusub ee caymiska baabuurka – ama caymiska guryaha –waa inuu hubiyaa in wakiilka ama shirkadda xamuulka ee diyaarinaysa qiimaha ay fahmayaan inta sano iyo bilood ee macaamilku lahaa caymiska. Tani waa inay noqotaa caymis joogto ah si loo dalbado, iyada oo aan wax nasasho ah ama nabarro ahi jirin.
PreviousDaryeelka caruurta ee mareykanka
NextDiyaar Garow Intaadan Dalbalin Amaah Ganacsi